Home News Madaxweyne farmaajo oo Madaxweynaha Kenya ka Codsaday Hal Arin oo Qarsoon??
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho hal cisho ah ku jooga dalka Kenya ayaa wada hadallo kula yeeshay Madaxtooyada Kenya dhiggiisa dalkaas ee Uhuru Muigai Kenyatta,kaasi oo uu ka codsaday in Mucaaradka Kenya eek u sugan Nairobi in aan la siiin Fursad ay shacabka ku kiciyaan islamarkaana ay shirar ugu qabtaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Kenya sida ay dowladdiisu u baajisay Kullankii C/raxmaan C/shakuur Warsame ee dhawaan ka dhici lahaa Nairobi kaasi oo is hor-istaag lagu sameeyay.
Waxyaabaha kale ee ay labada Madaxweyne ka wada hadleen waxaa ka mid ah Sidii looga shaqeeyn lahaa Mideeynta Labadda Dowladood si aan looga helin Dumin iyaga oo hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay Meel marinta arimahaan oo qarsoodi ahaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku heshiiyay in la sameeyo guddi wadajir ah oo u kuur gala xaaladda degmada Balad Xaawo, isla markaasna soo diyaariya warbixin dhameystiran oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee ka jirta xuduudda u dhaxeysa labada dal,taasi oo cadeeyneeysa in Rabitaanka Kenya halkaasi laga Fuliyay.
Talaabadaan ayaa waxaa ay caawin doontaa Kooxda Qiyaano qaran,waxaa sidoo kale la qiyaasayaa in laga hadlay arinta badda hase’yeeshee warcad kama soo bixin Go’aanka hoose ee laga gaaray